Ilkay Gundogan Oo Magacaabay Xiddigga La Xaqiro Ee Qiimayntii Uu Xaqa U Lahaa Loo Diiray, Laacibkii Ugu Adkaa Ee Uu Ka Hor Tegay & Halyeyga Uu Jecel Yahay - Gool24.Net
Ilkay Gundogan Oo Magacaabay Xiddigga La Xaqiro Ee Qiimayntii Uu Xaqa U Lahaa Loo Diiray, Laacibkii Ugu Adkaa Ee Uu Ka Hor Tegay & Halyeyga Uu Jecel Yahay
Laacibka Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa magacaabay xiddiga dunidu ugu xaqiraadda badan tahay ee aan la siinin qiimayntii uu mudnaa ee la xidhiidhay bandhiggiisa kubadda cagta.
Ilkay Gundogan oo kasoo kabtay xanuunka Korona Fayraska oo uu u jiifay toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa waxa uu isku diyaarinayaa ciyaarta caawa ay kooxdiisu ku martigelinayso Arsenal, taas oo ay u baahan yihiin inay guul ka keenaan kaddib laba ciyaarood oo xidhiidh ahaa oo ay midna barbarro galeen midna laga badiyey.
Xiddigan reer Germany oo ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayey baraha bulshada gaar ahaan Twitterka, ayaa waxa uu magacaabay laacib aan dunida ka helin qiimayntii uu xaqa u lahaa oo laga duudsiyo, taas oo aan la garanayn inuu si ula kac ah dacaayad ugaga dhigayey Manchester United iyo inay daacad ka ahayd.
Weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku oo Inter Milan u dhaliyey 37 gool 54 ciyaarood oo uu u saftay ayaa waxa uu Gundogan sheegay inuu yahay laacib la xaqiro oo aan qiimayntiisii helin, iyadoo uu waliba si gaar ah farta ugu fiiqay waqtigiisii Manchester United.
Ilkay Gundogan oo jawaabo gaagaaban bixinayay ayaa mar la weydiiyey ciyaartoyga lagu xaqiray qiimaynta kubadda cagta, waxa uu si kooban ugu jawaabay: “Waa Romelu Lukaku”.
Laacibkii ugu adkaa ee ay garoomada iskaga hor yimaaddeen ayaa haddana la weydiiyey, waxaanu markiiba lasoo booday laacibkii waqtiga gaaban Real Madrid u ciyaaray ee Borussia Dortmund hadda ka tirsan ee Nuri Sahin.
Ilkay Gundogan oo mar kale la su’aalay ciyaartoyda uu ugu jeclaa ee kubadda cagta ka fadhiistay ayaa waxa uu sheegay in Ronaldinho uu ahaa laacibka uu ugu jeclaa ee kubadda ka fadhiistay.